Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya waxay gashay Dambi-Dagaal oo muuqda Cabdi ileyna wuxuu ahaa gacanta ay ku fulisay
Itobiya waxay gashay Dambi-Dagaal oo muuqda Cabdi ileyna wuxuu ahaa gacanta ay ku fulisay
Posted by ONA Admin	/ January 14, 2014
Dambiyada ay Itobiya ka gashay shacabka Somalida Ogadenya gaar ahaan ma’aha wax ku qarsoomaya socdaalada diblomaasi ee wufuuda ay u soo dirayso dawladaha reer-galbeedka qaarkood. Dambiyada ay ka gashay Itobiya shacabka Ogadenya waa mid aan ka hadhaynin jiritaanka Itobiya inta ka hadhay. Itobiya waxaad moodaa inay ku nooshahay weli qarnigii 18aad oo dambiyada ay shacabkeena ka galaysay uu ahaa mid aan soo dhaafin xadka goobta gaboodfalka uu ka dhacay. Maanta isbadalka caalamka ka dhacay xagga aqoonta iyo tiknoolojiyada waxay keentay in dambiyada Itobiya ay keydsan yihiin, ganatii fulisayna sidoo kale la yaqaano oo la daawanayo.
Dad badan oo dhibaato loo gaystay ayaa jeclaan lahaa inay indhahooda ku arkaan iyadoo cadaaladda la soo taagay gacan-ku-dhiiglayashii dhibaateeyay iyaga ama eheladooda, waxaana hubaal ah inuu qofkuu Ilaahay nolol u qoray arki doono, sababtoo ah dacwadda ku socota Itobiya iyo gacan ku-dhiiglayaashii gaystay falalkaa bahalnimada ah meel fiican ayay mareysaa, caddaymihii looga baahnaana xeer-ilaaliyaha iyo qareenada qaabilsan dacwadaa ayaa gacanta ku haya.
Adeegsiga dacaayadda Itobiya ee ugu muuqda dadka qaarkood inuusan sharciga caalamka qabanin oo damabiyada ay galayaan gacan-ku-dhiiglayaasha ay ku shaqaysato aan waxba laga qaadi karin waxaa soo afjari doona waqtiga. Sida ku qoran maqaalka Qorhay Media ( .. Shacabka intii danaynaysay dacwada kasocoto Yurub ee dhanka ka ah dhamaan dadkii arimahaas foosha xun kagaystay gudaha Ogadenya ee uu kamidka yahay Cabdi Illey waxaan lasocodsiinayaa in ay dacwadu meel fiican marayso balse wakhti xaadirkan aysan gaadhin heerkii lagu qaban lahaa danbiilayaasha maadaama sida la ogsoonyahay ama dadka inta aqoonta lihi ay fahmi karaan ay dacwadu marayso marxalado kala duwan ..), waxaa hubaal ah in dacwadda lagu soo oogay Cabdi Iley iyo Jananada ka taliya Ogadenya ay marxaladihii ugu dambeeyay marayaan, oo Itobiyana ay ogsoontahay midaa. Waxaana iman doonta waqti la raadiyo qofkii looga siiban lahaa oo lagu badbaadin lahaa Jananadaa.
عن أبي موسى – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته))، قال: ثم قرأ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [هود: متفق عليه.
Xadiithkan saxiixa ah wuxuu noo sheegay Abi Musa RC inuu Rasuulka CS yidhi; Ilaahay wuxuu u seeta dheereeyaa daalimka, marka uu qabtase kama fakan karo. Wuxuuna ku ayiday Rasuulka CS aayadaa Quraanka ah ee Ilaahay uu ku cadeeyay sidaa.